इटालीमा हेलोवीन | Absolut यात्रा
Isabel | | इटाली
इटालियन क्यालेन्डरमा स indicated्केत गरिएको दुई मध्ये सब भन्दा महत्वपूर्ण मितिहरू सबै संत दिवसहरू (बुट्टी i Santi पनि भनिन्छ) जुन नोभेम्बर १ मा मनाइन्छ र मृत दिन (Il Giorno dei Morti), जुन नोभेम्बर २ मा मनाइन्छ। यो एक धार्मिक र पारिवारिक प्रकृतिको दुई उत्सव हो जहाँ यसका सदस्यहरू त्यहाँ भेट्टाउनेहरूलाई सम्झन भेला हुन्छन्। र भगवानले अभिषेक गर्नेहरूलाई आदर गर्नु
दुबै चाड़हरू क्रिश्चियन परम्परा भएका देशहरूमा तर विभिन्न तरिकाहरूमा मनाइन्छ। ए Anglo्ग्लो-स्याक्सन देशहरूमा हेलोवीन मनाइन्छ जबकि क्याथोलिक सम्पदाका देशहरूमा यो सबै संत दिवस र सम्पूर्ण आत्मा दिवसमा मनाइन्छ। अर्को पोस्टमा हामी यो प्रश्न र कसरी हेलोवीन इटालीमा मनाइन्छ जान्छौं.
1 सबै संत दिवस इटालीमा कसरी मनाइन्छ?
2 इटालीमा कसरी सम्पूर्ण आत्मा दिवस मनाइन्छ?
3 र केहि इटालियन क्षेत्रहरूमा?
4 हेलोवीन भनेको के हो?
4.1 आज हेलोवीन कसरी मनाइन्छ?
4.2 के तपाईंलाई हेलोवीनको चाल वा उपचार थाहा छ?
5 र हेलोवीन इटालीमा कसरी मनाइन्छ?
सबै संत दिवस इटालीमा कसरी मनाइन्छ?
Tutti i Santi को दिन Il Giorno dei Morti को दिन भन्दा फरक छुट्टी हो। नोभेम्बर १ सबै ती आशिषित वा सन्तहरूको लागि विशेष तरिकामा मनाइन्छ जुन उनीहरूको विश्वासलाई विशेष प्रकारले बाँच्दछन् वा यसको लागि मर्दछन्, जो शुद्ध भएपछि पवित्र पारिएका छन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गको राज्यमा बसिरहेका छन्। ।
इटाली र क्याथोलिक परम्परासहितका अन्य देशहरूमा पनि यो दिन ठूलो चर्च र क्याथेड्रलहरूमा सन्तहरूको अवशेष प्रदर्शन गरेर मनाइन्छ।
इटालीमा कसरी सम्पूर्ण आत्मा दिवस मनाइन्छ?
यो एक राष्ट्रिय बिदा हो। त्यो दिन बिहान सबेरै गिरजाघरहरूमा मृतकको माग पूरा हुन्छ र बाँकी दिन इटालियनहरू फूलहरू लिएर चिहानमा गए। जसका साथ उनीहरूले आफ्ना मृतकका आफन्तहरूलाई सम्मान गर्दछन्, विशेष गरी गुलदाउदी, र उनीहरू आफ्ना प्रियजनको चिहानमाथि नजर राख्छन्। यो दिन नोभेम्बर २ मा लिन्छ र यसको उद्देश्य मरेकाहरूको लागि प्रार्थना गर्ने हो उनीहरूको सम्झनालाई सम्झन र उहाँलाई आफ्नो पक्षमा स्वागत गर्न परमेश्वरलाई सोध्नु।
अर्कोतर्फ, इटालेलीहरू अक्सर परम्परागत बीन-आकारको केक पकाउँदछन् जुन "ओस्सा देई मोर्ति" भनेर चिनिन्छ। यद्यपि यसलाई अक्सर "मृतको केक" पनि भनिन्छ। उहाँ यी दिनहरूमा सँधै पारिवारिक जमघटहरूमा उपस्थित हुनुहुनेछ किनभने यो विश्वास गरिन्छ कि मृतकहरू त्यस दिन भोजमा भाग लिन फर्कन्छन्।
धेरै परम्परागत परिवारहरू टेबल तयार गर्छन् र चर्चमा गएकााहरूको लागि प्रार्थना गर्छन्। ढोका खुला छोडिएका छन् ताकि आत्माहरू घरभित्र पस्न सक्दछन् र परिवारबाट चर्च नफर्कुन्जेल कसैले पनि खानालाई छोउँदैनन्।
र केहि इटालियन क्षेत्रहरूमा?
Sicilia: यस क्षेत्रका सबै सन्तहरूको रातको समयमा यो विश्वास गरिन्छ कि परिवारका मृतकहरू साना बच्चाहरूलाई मार्टोराना र अन्य मिठाइहरूको फलहरू दिन चाहन्छन्।
मासा कारारा: यस प्रान्तमा खाँचोमा परेकाहरूलाई वितरण गरिन्छ र तिनीहरूलाई एक गिलास वाइन दिइन्छ। बच्चाहरू प्राय: उमालेको चेस्टनट र स्याउको नेकलेस बनाउँछन्।
मोन्टे अर्जेन्टेरियो: यस क्षेत्रमा परम्पराले मृतकको चिहानमा जुत्ता लगाउने थियो किनभने यस्तो सोचाइ थियो कि नोभेम्बर २ को रात उनीहरूको प्राण जीवित संसारमा फर्किनेछ।
दक्षिणी इटालीको समुदायहरूमा ग्रीक-बाइजान्टिन संस्कारको पूर्वीय परम्परा अनुसार मृतकलाई श्रद्धांजलि दिइन्छ र उक्त उत्सव लेन्टको सुरुवात हुनुभन्दा केही हप्ता अघि हुने गर्दछ।
हेलोवीन भनेको के हो?
मैले अघिल्लो लाइनमा भनेजस्तै, हेलोवीन एंग्लो-स्याक्सन परम्पराको देशहरूमा मनाइन्छ। यस उत्सवको मूल जरा समाहिन भन्ने पुरानो सेल्टिक फेस्टिवलमा छ, जुन ग्रीष्म theतुको अन्त्यमा भएको थियो जब फसलको मौसम समाप्त भयो र नयाँ वर्ष शरद stतुमा संयोग गरे।
त्यो बेला यो विश्वास थियो कि मरेका आत्माहरु हेलोवीन रातमा जीवितहरूका बीचमा हिँड्थेअक्टुबर st१ यस कारणले गर्दा मृतकसँग कुराकानी गर्न र मैनबत्ती बाल्ने केही विधिहरू गर्ने प्रथा थियो ताकि तिनीहरूले अर्को विश्वमा उनीहरूको बाटो भेट्टाउन सकून्।
आज, हेलोवीन पार्टी मूल भन्दा धेरै फरक छ। पक्कै पनि तपाईले यो धेरै चलचित्रहरूमा देख्नुभयो! अब हेलोवीनको अलौकिक अर्थलाई अलग राखिएको छ एक चंचल प्रकृति को एक उत्सव को बाटो दिनुहोस्, जहाँ मुख्य उद्देश्य साथीहरूको कम्पनीमा रमाईलो गर्नु हो।
आज हेलोवीन कसरी मनाइन्छ?
धेरै व्यक्ति घर भोजका लागि लुगा लगाउँदछन् वा साथीहरूसँग नाइटक्लबमा बाहिरिन थीम्ड कार्यक्रमहरूमा रमाईलो गर्छन्। यस अर्थमा, बार, क्याफे, डिस्को र अन्य प्रकारका पसलहरूले पार्टीको विशिष्ट विषयवस्तुको साथ सबै प्रतिष्ठानहरू सजाउने प्रयास गर्दछन्।
यस परम्पराको सजावटी प्रतीक ज्याक-ओ-ल्यान्टर्न हो, यो बाहिरको अनुहारमा उदास अनुहारले बनेको कुम्सी हो र जसको भित्री भागलाई खाली मैनबत्ती राखेर खाली पारिन्छ। परिणाम डरलाग्दो छ! यद्यपि अन्य सजावटी आकृतिहरू जस्तै कोबवेज, कंकाल, चमगादुर, चुटकी, आदि पनि प्रयोग गरिन्छ।
के तपाईंलाई हेलोवीनको चाल वा उपचार थाहा छ?
बच्चाहरूले पनि हेलोवीनको आनन्द लिन्छन्। वयस्कहरू जस्तै, उनीहरूले उनीहरूको छिमेकका घरहरू वरिपरि जान लगाउँथे जुन उनीहरूको छिमेकीहरूलाई उनीहरूलाई मिठाई दिन आग्रह गर्दछन् प्रसिद्ध "चाल वा उपचार" को माध्यमबाट। तर यसले के समावेश गर्दछ?
धेरै सजीलो! हेलोवीनमा तपाईंको छिमेकीको ढोका ढकढक्याउँदा, केटाकेटीहरूले एउटा चाल स्वीकार्न वा सम्झौताको प्रस्ताव राख्छन्। यदि उसले उपचार छनौट गर्छ, बच्चाहरूले क्यान्डी प्राप्त गर्दछन् तर यदि छिमेकीले उपचार छनौट गर्दछ भने, त्यसपछि बच्चाहरूले उनीहरूलाई मिठाई नदिई मजाक वा शरारत बनाए।
र हेलोवीन इटालीमा कसरी मनाइन्छ?
ए Anglo्ग्लो-स्याक्सन मूलको उत्सव भएता पनि, यो धेरै इटालीभरि फैलिएको छ र विशेष गरी वयस्कहरूले मनाउँछन्, बच्चाहरूले त्यति धेरै गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई घरमा "ट्रिक वा उपचार" गरेको देख्नु असाधारण कुरा हो।
प्राय जसो इटालीवासीहरूले राम्रो समयको आनन्द लिन क्लब वा घरहरूमा पार्टीहरू जानको लागि लुगाफाटा लगाउँछन् साथीहरूको संगतिमा, केहि पेय खाएर र बिहान नभएसम्म।
इटालीमा पसलहरू पनि विशिष्ट हेलोवीन सजावटको आकृतिहरू जस्तै कद्दू, राक्षस, कोबवेज, चमगादुर, चुरोट वा भूतहरू लगायत अन्यले सजिएका हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » इटालीमा हेलोवीन